IMinneriya, i-safari ehamba phambili eSri Lanka | Izindaba Zokuhamba
Enric Gili | | Colombo, General, Ukuzilibazisa, i-Sri Lanka
Namuhla ngizokutshela ngolunye lohambo olubalulekile uma uhambela eSri Lanka, i-safari eMineriya National Park.
IMinneriya ingenye yamapaki kazwelonke amakhulu kunazo zonke eSri Lanka. Itholakala esifundazweni esisenyakatho-maphakathi nezwe futhi inendawo elinganiselwa kumahektha angama-9000.
Yathola ukuvikelwa okusemthethweni njengepaki ngo-1997 ngenxa yobuningi bezilwane zasendle emhlabeni wayo nokuvikela amachibi ahlinzeka ngezitshalo nezilwane zale ndawo.
Yindawo ebaluleke kakhulu evikelwe futhi incintisana nokuthandwa yiYala, iBundala neUdawalawe, eyaziwa kakhulu eCeylon. Ngamunye wabo ugqama ngesizathu esithile, iMinneriya ngaphandle kokungabaza ngenxa yezindlovu. Wonke umuntu ohambela eSri Lanka kumele aye emapaki kazwelonke ayi-1 noma ama-2.
Isikhathi esihle sokuyivakashela kusuka ngoJulayi kuya ku-Okthoba, okuyisikhathi esomile enyakatho yezwe. Ehlobo, izimvula ziyindlala futhi izilwane ziphoqeleka ukuba zifudukele ezindaweni ezingamaxhaphozi nasemachibini akulesi siqiwi.
1 Ungafika kanjani eMinneriya?
2 Yini ongayibona eMinneriya? Izilwane
3 Yini ongayibona eMinneriya? UFlora
Ungafika kanjani eMinneriya?
IMinneriya isondele kakhulu kunxantathu owaziwayo wamasiko eSri Lanka, izindawo ezi-3 ezibaluleke kakhulu zezinto zakudala ezweni futhi ngokuqinisekile indawo yezokuvakasha kunazo zonke eCeylon (Sigiriya, Anuradhapura nasePolonnaruwa). Ngalesi sizathu kulula ukufika kule National Park. Imvamisa, abahambi abenza unxantathu wamasiko nabo bakhetha ukwenza iMinineriya safari.
Ukufika lapho wenze i-safari noma ungene ngaphakathi, kufanele uqashe insiza yezinkampani ezizimele ngemoto engu-4 × 4 nomshayeli, awukwazi ukuzihambela (kusukela ngo-2015). Ungazungeza kuphela ngaphakathi kwendawo evikelekile ngezimoto ezi-4 × 4. Intengo akufanele idlule ngaphezu kwama- $ 45 noma ama- $ 50 umuntu ngamunye. Imvamisa isikhathi sokuvakasha singamahora ama-3 noma ama-4, anele ukuhamba buthule ehlathini nasemathafeni nasemachibini.
Kulula kakhulu ukwenza inkontileka yale nsizakalo uma sesisezweni, awudingi ukuthi uyiqashe kusuka lapha. Indawo yokulala noma ihhotela uqobo luzophatha uhambo. Enye indlela ukuya emadolobheni aseduze kakhulu nomnyango wepaki bese uqasha i-ejensi lapho, ohlangothini naseceleni komgwaqo kugcwele izinkampani ezinikela ngentengo efanayo ngaso sonke isikhathi ukwenza lolu hambo.
Into enengqondo kunazo zonke kungaba ukungena epaki evela eSigiriya inikezwe ukusondela kwayo (i-10Km kuphela), ngincoma ukuthi uvakashele indawo yokuvubukula nendawo yamagugu omhlaba kaSigiriya ekuseni, uqale ekuseni kakhulu, kuthi ntambama uthuthele eMinneriya qhubeka nohambo. ISigiriya ingafinyelelwa ngesitimela, ngemoto noma ngebhasi ukusuka eColombo (inhlokodolobha) noma eKandy (idolobha lesibili ngobukhulu futhi elisenkabeni yeSri Lanka).
Kuhle kakhulu ukubona ukuthi ilanga lishona kanjani lizungezwe izindlovu namathafa amahle akulesi siqiwu.
Enye indlela etholakalayo ukwenza ingxenye yesafari egibele indlovu. Amanye ama-ejensi ahlinzeka ngale nsizakalo, ehamba eMineriya ngezindlovu ezinqamula ezindaweni ezinotshani namahlathi. Ngokwami, angazi noma kufanele yini, ngincamele ukwenza lonke lolu hambo ngemoto.
Yini ongayibona eMinneriya? Izilwane
IMinneriya National Park idume umhlaba wonke ngezindlovu zayo zase-Asia. Kunamakhulu awo endle futhi kulula kakhulu ukubona inqwaba yawo ntambama efanayo. Ukuhlalisana phakathi kwabantu nalezi zilwane kungokwemvelo ngokuphelele futhi ngenhlonipho, sebejwayele inqwaba yezimoto eziza zizobabona nsuku zonke. Namanje ngokwami ​​ngicabanga ukuthi kunezimoto eziningi kakhulu endaweni lapho kunezilwane eziningi khona. Angazi noma uhulumeni ubeke umkhawulo omkhulu wokungena epaki.
Ngesikhathi sasehlobo (isikhathi esomile endaweni), izindlovu ziza izikhathi ezi-1 noma ezi-2 ngosuku zizophuza amanzi echibini elikhulu, kulapho ungabona khona izindlovu eduze.
Ngaphandle kwezindlovu, lesi siqiwi sigcwele nezinkawu, onogwaja, ama-flamingo nazo zonke izinhlobo zezinyoni, amapikoko, izinyathi zamanzi, ... Kukhona nezingwe, yize kunzima kakhulu ukuzibona.
Kumahektha ambalwa ungabona zonke izinhlobo zezilwane.
Yini ongayibona eMinneriya? UFlora
IMinneriya National Park itholakala ehlathini laseSri Lanka.
Izimila zalesi siqiwi ziqukethe amahlathi ahlala eluhlaza asezindaweni ezishisayo, ahlanganiswe nezindawo ezinotshani, izindawo zezihlahla nezixhaphozi. Indawo ebabazekayo kule ndawo ngamachibi kanye nezimfunda.
Ezinye izihlahla ezikhona eMinneriya zingabomdabu kulesi siqhingi, ziyabonakala kuphela kuleli. Isibonelo isihlahla sesundu iCeylon. Isimo sezulu esifudumele nesinemvula senza isikhala sobuhle bemvelo obuhlukile.
Ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ngingakutshela ukuthi i-safari eSri Lanka ayifani ne-safari yase-Afrika kepha kungokuhlangenwe nakho okunconywe ngokuphelele uma uhambela eSoutheast Asia. Njengoba ngishilo ngaphambili, uma unikezwe ukusondela kukanxantathu wamasiko, ngiphakamisa ukuthi uye eSigiriya ekuseni naseMinneriya ntambama. Ukungena akubizi kakhulu kepha emahoreni ama-2 noma ama-3 we-safari uzokujabulela ukubukeka nezilwane zepaki.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Amadolobha » Colombo » IMinneriya, i-safari ehamba phambili eSri Lanka
Izindawo ezishibhile emhlabeni zise-Asia